ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အသက်ရှင်သန်နိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေထဲ မှာသေနိုင်လား နေပူထဲ မှာ ဘယ်လောက်ရှင်နိုင်လဲဆိုတာ ပညာရှင်ရဲ့ ရှင်းပြချက်များ – Zartiman
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အသက်ရှင်သန်နိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေထဲ မှာသေနိုင်လား နေပူထဲ မှာ ဘယ်လောက်ရှင်နိုင်လဲဆိုတာ ပညာရှင်ရဲ့ ရှင်းပြချက်များ
Zarti Man | April 15, 2020 | Knowledge | No Comments
မြန်မာပြည်က ရာသီဥတုအပူချိန်က 40 degree C လောက်ဆို အတော်ပူနေ ပါပြီ။ Sars-CoV-2 virus က အဲ့ဒီအပူချိန်မှာ ပါတီပွဲကျင်းပ နေနိုင်ပါတယ်။ လုံးဝ မသေနိုင်ပါ။ ? အဲ့ဒီတော့ လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့သေချာကိုဆေး၊ ရာသီဥတုကို အားကိုးနေလို့ မရတော့ပါဘူး။ ကဲ ပိုသိ ချင်သူတွေအတွက် အထက်က စမ်းသပ်ချက်အကြောင်း ဆက်ပြောပါမယ်။ ? အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်လ က်ခံအတွက် သုံးနေကျဖြစ်တဲ့ အာ ဖရိကမျောက်စိမ်းရဲ့ ကျောက်ကပ်ဆဲလ်တွေကို Sars-CoV-2 virus ကူးစက်စေပါသတဲ့။ ? Sars-CoV-2 virus က ဂျာမနီက လူနာတစ် ယောက်ဆီက ရယူထားတာပါ။ ?? အဲ့ဒီမှာ ဖန်ပြွန်2ချောင်းမှာ စမ်းပါသတဲ့။
တစ်ချောင်းက clean သန့်တယ်။ နောက်တ စ်ချောင်းက dirty လူတွေရဲ့ ပါးစပ်က swab အခြေအနေ နဲ့တူအောင် တိရိစ္ဆာန် ပရိတိန်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အပူပေးတာနဲ့ clean ဘက်အချောင်းက ပိုးသေသွားတယ်။ dirty ဘက်အခြမ်းမှာ ပိုးအချို့က မသေပဲကျန်နေပါ သတဲ့။ ♦️အဲ့ဒီတော့ lab ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမဟုတ်ပဲ အပြင်လောကမှာ ပိုးပမာဏ များတဲ့ အမှုန်နဲ့ ထိတွေ့ထားရင် အပူချိန် 60 degree C နဲ့ တစ်နာရီကြာ အပူပေးသတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီမှာ ထောက်ပြချက်က ကျနော်ရေးဖူးတဲ့ အများသုံးရေချိုးကန်က ကူးတဲ့ ကိစ္စပါ။
ပြင်သစ်က ပရော်ဖက်ဆာ Remi Charrel နဲ့အဖွဲ့ရဲ့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုအရ Sars-CoV-2 virus က အပူချိန် 60 degree C မှာ တစ်နာရီ လောက်အပူပေးတာမသေပါဘူးတဲ့။ (Sars-CoV-2 virus ဆိုတာက COVID-19 ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပါ။) ?️ အဲ့ဒါနဲ့ အပူချိန်ကို ရေဆူအမှတ် နီးနီးတင် လိုက်တော့မှ Sars-CoV-2 virus လုံးဝသေသွားပါတယ်တဲ့။ ဒီကိစ္စ မှာ ကျနော်တို့ အတွက် သတိထားစရာ (၃) ချက်တွေ့ပါတယ်။
(၁) ရေကိုချောင်းရေ၊ မြစ်ရေ၊ မြေအောက်ရေက သောက် ရင် ကျိုချက်ပြီးမှ သောက်ရပါတော့မယ်။ ပလုတ်ကျင်းတာအတွက်ပါ ဂရုစိုက် ရမယ့်သဘောဖြစ်လာပါတယ်။ Sars-CoV-2 virus ဟာ ဝမ်းထဲမှာပါပါတယ်။ ကျနော်က ရွာမြစ်ကမ်းစပ်က အိမ်သာတွေကို မြင်ဖူးလို့ သတိပေးတာပါ။ ♦️ပြီးတော့ အိမ်သာ၊ မြောင်းတို့နဲ့ နီးကပ်တဲ့ အဝီစိတွင်း၊ ရေတွင်းတွေ၊ အကာ မရှိရေကန်ရေတွင်းတွေအတွက် မိုးကာလ မှာ စိတ်ပူပါတယ်။ Sars-CoV-2 virus ပိုပြီးညစ်ပတ်တဲ့ရေမှာ ပိုအသက်ရှည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေနွေးနဲ့ ပလုတ်ကျင်းလို့ လည်ချောင်း ထဲက ပိုးမသေ ပါဘူး။
(၂) lab ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်တွေ၊ ဆေးရုံတွေ အတွက် ပိုဂရုပြုရ ပါတော့မယ်။ ♦️ 60 degree C, hour-long protocol ကို လိုက်နာလို့မရတော့ပါဘူး။ ? အဲ့ဒီတော့ 92 degree C အထက် ရေဆူဆူမှာ 15 မိနစ်ကြာအပူပေးသတ်မလား၊ ဆပ်ပြာ၊ အရက်ပျံ၊ အရောင်ချွတ်ဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေးရည်တွေ သုံးပြီးသတ်မလား သင့်တော်သလို စီမံကြပါ။
(၃) မြန်မာပြည် လို ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာ ပိုးသေတယ်လို့ ယူဆထားကြသူတွေ။
ဟောဒီမှာ link ပါ။ https://www.facebook.com/100000543557502/posts/3347252598636159/?d=n ရေက 40 degree C ထက်အထက်ရှိပြီး 60% စိုထိုင်းဆရှိတဲ့ ရေချိုးကန်ကနေ2ပတ်အတွင်း လူအချို့ကို ကူးစက်သေခဲ့တယ်။ အဲ့မှာမရှင်းတာက ဘယ်ကနေ ကူးသလဲ သေချာမဖော်ပြနိုင်ဘူး။ ရေချိုးကန်ဆိုတော့ CCTV မရှိလို့ ရေကလား၊တံခါးလက်ကိုင်က ကူးသလား မသိနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အ ပူချိန် 40 degree C (အညာနွေ လောက်ပူတဲ့) ရေမှာ ပိုးသေမသေစိတ်မချရတော့ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ စင်ကာပူလို ရာသီဥတု မျိုး၊ မြန်မာပြည် ဧပြီလကုန်နဲ့ မေလမှာ ပိုးက ပိုသက်သာစရာမရှိဘူး။ ? ဒါကြောင့် ကျနော်အ ထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ (၃) ချက်ကို ဂရုပြု ကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား။
REF: Richard Myo Thant (15-April-2020)
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ၏ အသကျရှငျသနျနိုငျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ရထေဲ မှာသနေိုငျလား နပေူထဲ မှာ ဘယျလောကျရှငျနိုငျလဲဆိုတာ ပညာရှငျရဲ့ ရှငျးပွခကျြမြား
မွနျမာပွညျက ရာသီဥတုအပူခြိနျက 40 degree C လောကျဆို အတျောပူနေ ပါပွီ။ Sars-CoV-2 virus က အဲ့ဒီအပူခြိနျမှာ ပါတီပှဲကငျြးပ နနေိုငျပါတယျ။ လုံးဝ မသနေိုငျပါ။ ? အဲ့ဒီတော့ လကျကိုဆပျပွာနဲ့သခြောကိုဆေး၊ ရာသီဥတုကို အားကိုးနလေို့ မရတော့ပါဘူး။ ကဲ ပိုသိ ခငျြသူတှအေတှကျ အထကျက စမျးသပျခကျြအကွောငျး ဆကျပွောပါမယျ။ ? အဲ့ဒီအဖှဲ့ဟာ ဗိုငျးရပျဈလ ကျခံအတှကျ သုံးနကေဖြွဈတဲ့ အာ ဖရိကမြောကျစိမျးရဲ့ ကြောကျကပျဆဲလျတှကေို Sars-CoV-2 virus ကူးစကျစပေါသတဲ့။ ? Sars-CoV-2 virus က ဂြာမနီက လူနာတဈ ယောကျဆီက ရယူထားတာပါ။ ?? အဲ့ဒီမှာ ဖနျပွှနျ2ခြောငျးမှာ စမျးပါသတဲ့။
တဈခြောငျးက clean သနျ့တယျ။ နောကျတ ဈခြောငျးက dirty လူတှရေဲ့ ပါးစပျက swab အခွအေနေ နဲ့တူအောငျ တိရိစ်ဆာနျ ပရိတိနျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အပူပေးတာနဲ့ clean ဘကျအခြောငျးက ပိုးသသှေားတယျ။ dirty ဘကျအခွမျးမှာ ပိုးအခြို့က မသပေဲကနျြနပေါ သတဲ့။ ♦️အဲ့ဒီတော့ lab ဓာတျခှဲခနျးထဲမှာမဟုတျပဲ အပွငျလောကမှာ ပိုးပမာဏ မြားတဲ့ အမှုနျနဲ့ ထိတှထေ့ားရငျ အပူခြိနျ 60 degree C နဲ့ တဈနာရီကွာ အပူပေးသတျလို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီမှာ ထောကျပွခကျြက ကနြျောရေးဖူးတဲ့ အမြားသုံးရခြေိုးကနျက ကူးတဲ့ ကိစ်စပါ။
ပွငျသဈက ပရျောဖကျဆာ Remi Charrel နဲ့အဖှဲ့ရဲ့ စမျးသပျတှရှေိ့မှုအရ Sars-CoV-2 virus က အပူခြိနျ 60 degree C မှာ တဈနာရီ လောကျအပူပေးတာမသပေါဘူးတဲ့။ (Sars-CoV-2 virus ဆိုတာက COVID-19 ရောဂါကို ဖွဈစတေဲ့ဗိုငျးရပျဈပိုးပါ။) ?️ အဲ့ဒါနဲ့ အပူခြိနျကို ရဆေူအမှတျ နီးနီးတငျ လိုကျတော့မှ Sars-CoV-2 virus လုံးဝသသှေားပါတယျတဲ့။ ဒီကိစ်စ မှာ ကနြျောတို့ အတှကျ သတိထားစရာ (၃) ခကျြတှပေ့ါတယျ။
(၁) ရကေိုခြောငျးရေ၊ မွဈရေ၊ မွအေောကျရကေ သောကျ ရငျ ကြိုခကျြပွီးမှ သောကျရပါတော့မယျ။ ပလုတျကငျြးတာအတှကျပါ ဂရုစိုကျ ရမယျ့သဘောဖွဈလာပါတယျ။ Sars-CoV-2 virus ဟာ ဝမျးထဲမှာပါပါတယျ။ ကနြျောက ရှာမွဈကမျးစပျက အိမျသာတှကေို မွငျဖူးလို့ သတိပေးတာပါ။ ♦️ပွီးတော့ အိမျသာ၊ မွောငျးတို့နဲ့ နီးကပျတဲ့ အဝီစိတှငျး၊ ရတှေငျးတှေ၊ အကာ မရှိရကေနျရတှေငျးတှအေတှကျ မိုးကာလ မှာ စိတျပူပါတယျ။ Sars-CoV-2 virus ပိုပွီးညဈပတျတဲ့ရမှော ပိုအသကျရှညျပါတယျ။ ပွီးတော့ ရနှေေးနဲ့ ပလုတျကငျြးလို့ လညျခြောငျး ထဲက ပိုးမသေ ပါဘူး။
(၂) lab ဓာတျခှဲခနျးပညာရှငျတှေ၊ ဆေးရုံတှေ အတှကျ ပိုဂရုပွုရ ပါတော့မယျ။ ♦️ 60 degree C, hour-long protocol ကို လိုကျနာလို့မရတော့ပါဘူး။ ? အဲ့ဒီတော့ 92 degree C အထကျ ရဆေူဆူမှာ 15 မိနဈကွာအပူပေးသတျမလား၊ ဆပျပွာ၊ အရကျပြံ၊ အရောငျခြှတျဆေး၊ ပိုးသတျဆေးရညျတှေ သုံးပွီးသတျမလား သငျ့တျောသလို စီမံကွပါ။
(၃) မွနျမာပွညျ လို ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာ ပိုးသတေယျလို့ ယူဆထားကွသူတှေ။
ဟောဒီမှာ link ပါ။ https://www.facebook.com/100000543557502/posts/3347252598636159/?d=n ရကေ 40 degree C ထကျအထကျရှိပွီး 60% စိုထိုငျးဆရှိတဲ့ ရခြေိုးကနျကနေ2ပတျအတှငျး လူအခြို့ကို ကူးစကျသခေဲ့တယျ။ အဲ့မှာမရှငျးတာက ဘယျကနေ ကူးသလဲ သခြောမဖျောပွနိုငျဘူး။ ရခြေိုးကနျဆိုတော့ CCTV မရှိလို့ ရကေလား၊တံခါးလကျကိုငျက ကူးသလား မသိနိုငျဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အ ပူခြိနျ 40 degree C (အညာနှေ လောကျပူတဲ့) ရမှော ပိုးသမေသစေိတျမခရြတော့ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ပူနှေးစှတျစိုတဲ့ စငျကာပူလို ရာသီဥတု မြိုး၊ မွနျမာပွညျ ဧပွီလကုနျနဲ့ မလေမှာ ပိုးက ပိုသကျသာစရာမရှိဘူး။ ? ဒါကွောငျ့ ကနြျောအ ထကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ (၃) ခကျြကို ဂရုပွု ကွစလေိုပါတယျခငျဗြား။
နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေ နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ လမ်းများ အမည်များ အကြောင်း
ဖရဲသီး နဲ့ ဘဲဥ တွဲ စားရင် တကယ်သေပါသလား လေ့လာကြည့်တော့
သေကံမရောက်သက်မပျောက် ဆေးရုံ၌ သရဏဂုံ အစွမ်းကြောင့် အသက်ရှင် ခဲ့ရသူ